မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ဥာဏ်မီသလောက်တွေးတောမိခြင်း upon Meaningful Wedding
Do monks jerk?
ဘ၀င်မကျတာကို မေးခွင့်ရှိပါတယ်။ နောင်လဲ ဆက်ဆက်မေးပါဦး။ အဲလို မေးတာ ကို သဘောကျပါတယ်။ ဒီလိုအမေးမျိုးကို စာရေးဆရာဆန်းလွင်(အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) က တောင်ပုလုဆရာတော်ကိုမေးလျှောက်ဖူးပါတယ်။ .. ဘယ်လိုမေးခွန်း ကို ဆရာတော်က ဘယ်လို ရှင်းပြပြီး.. ဆန်းလွင်က ဘယ်လို နားလည်သဘောပေါက်သွားခဲ့သလဲ ဆိုတာ...ရတနာ သုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်း စာအုပ် ထဲပါ အချက်အလက်အချို့ကို ထုတ်နုတ် ရေးပေးပါဦးမယ်။ :)
KOM said my comments harsh for you. so i deleted above one. But still haveaquestion. What did you expect going Monastery today?
In LA, most single people going to monasteries is looking for relationship rather than religious reason :D :D :D
Singapore Myanmars are NOT အပဲ့ . but LA myanmars...
Haaaaaaa Haa....people can't stand when telling the truth, I meant not only in LA across the world,such as in AU,UK,USA son on